3 mba, 3 x echiche. Na-awụlikwa elu on a ụgbọ okporo ígwè si Munich na Venice ma na-aṅụ na 3 mba uru nke ikpọ echiche. Nke a akara-agba ọsọ site na ụfọdụ ihe ndị kasị mma ugwu, osimiri, na n'elu ugwu na obodo nta dị Austria, Germany, na Italy. 3-in1 nke The Kacha mma anyị hụtụrụla Train Njem na Europe.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fscenic-train-trips-europe%2F%0A%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#Ebe nkiri # Lee #Europe longtrainjourneys Train Travel